ओली सरकारको सय दिन : कामभन्दा कुरा बढी | Bichar | Image Khabar
गृहपृष्ठ Listen 97.9 FM Listen 103.6 FM
Listen 97.9 FM Listen 103.6 FM Watch TV
हाम्रा अन्य अनलाईन प्रकाशनहरु
इमेज च्यानल टेलिभिजन
इमेज एफ. एम. ९७.९ रेडियो - मनोरन्जन
इमेज एफ. एम. १०३.६ रेडियो - समाचार
इमेज बाईसेल वर्गीकृत
आईतवार, 23 चैत, 2076 Sunday, April 05, 2020
होमपेज / Bichar / ओली सरकारको सय दिन : कामभन्दा कुरा बढी
ओली सरकारको सय दिन : कामभन्दा कुरा बढी | Published: January 20, 2016 | बुद्धबार6माघ, 2072 | 12:25 PM | Viewed: 558 times
पदम सिँह कार्की -
भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको सालभित्र जन्मेको संविधानको सुँढिनीको जिम्मेवारी वहन गर्न वर्तमान सरकार जन्मेको हो । महाभूकम्पले गर्भमै थिलथिलिएको यो सरकारको सातो नाकाबन्दीले खाएकै हो । तीन महिनाको मधुमास पनि मधुमास नभएर कटुमास हुन पुग्यो । अझै थिग्रिन नसकेर बामे सर्दैगरेको ओली सरकारप्रति सहानुभुति जाग्दाजाग्दै पनि यसले गरेको बिँझाइप्रति आँखा चिम्लन उचित हुँदैन । यनकेन तङ्ग्रिन खोजेको यो सरकारको अगाडि तीनवटा समस्या टडकारो देखिन्थे ।
प्रजातान्त्रिक, संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयन गर्नू, मधेशीहरुको आन्दोलनलाई संविधान संशोधन गरेर निकास दिनु, ततपश्चात भारतको नाकाबन्दी खुलाएर आपुर्ति व्यवस्था सहज तुल्याउनुजस्ता कुनै कुरा पनि सरकारले फत्य पार्न सकेन तर त्योभन्दा ठुलो आलोचना त भूकम्प पिडीतको दर्दनाक अवस्थाले सिर्जेको छ । अधिकांश पिडीतहरु हिँउको छाना मुनी बस्न बाध्य छन् । प्राधिकरणको गठनमा कांग्रस समेतको मोलतोलले गर्दा अचाक्ली नै भयो । विदेशीले पेट काटेर दिएको सहयोग पनि सरकारले महिनौँदिनसम्म लक्षित समुदायमा पुर्‍याउन सकेन । चामल, औषधी र कम्बल समेत गोदाममा थन्क्याएर कुहाऊने यो सरकारलाई जति सरापे पनि कम हुन्छ । आजसम्म दोलखा र नुवाकोटमा पनि भूकम्प पिडीतलाई छुट्याएको रकम पुर्‍याउन नसक्नु अक्षमतामात्र हैन, अपराध पनि हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गठन गरेको जम्वो मन्त्रिपरिषदको आकार र प्रकारनै उनका लागि पहिलो गाँसमा झिँगा भएको सँकेत गर्‍यो । संविधानले तोकेको २५ जना मन्त्रीको संख्यालाई समेत ऊल्लङ्घन गरेर मिचाहा प्रवृतिको झलकमात्र दिएनन्, वल्कि ६ जना उपप्रधानमन्त्रीको भिड लगाएर उपहास र राजनैतिक प्रहसन देखाए । त्यतिमात्र हैन, वामपन्थी र गैर प्रजातन्त्रवादीहरुलाई दोव्वर पुरस्कार दिएर सरकारभन्दा पनि आत्मप्रशंसा गर्नेहरुको क्लव निर्माण गरे । अझ मन्त्री बढाउने हेतुले मनोमानी ढङ्गले मन्त्रालय फुटाईयो । त्यसबाट सुनको अण्डा पार्ने कुखुराको माउनै चपाउन खोजेको प्रतित हुन्छ । मन्त्रीहरुको संख्यामात्र हैन । उनीहरुले देखाएको सम्पति विवरणको बिस्कुन हेर्दा लाग्छ, उनीहरु सर्वहाराको क्रान्तिमा होईन निजी पुँजीको जोरजाममा मरिमेटेका रहेछन् । अर्कोतिर सम्पतिको विवरण नबुझाए बापत पनि यसै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले जरिवाना तिर्नु परेको छ । अकुत सम्पतिको यो कहालिलाग्दो जालोले लहरो तान्दा पहरो गर्जन सक्ने चेतावनी मात्र हैन, माकुराका बच्चाले आफ्नी आमालाई निलेझैँ कतै यी मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नै नलिनुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको विगत उज्यालो छ । दलगत रुपमा उनी सर्वेसर्वा हुन् । दलका निर्वाचित अध्यक्ष हुन् भने संसदीय दलका नेता पनि उनै हुन् । सफल परराष्ट्र मन्त्री र गृहमन्त्रीमात्र होइन, दलको सफल रुपमा परराष्ट्र विभाग हाँकेका नेता पनि हुन् । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा मधेश आन्दोलन मात्र तेश्रो हप्तामा चल्दै थियो । अहिले तीन महिना पुगिसक्दा पनि वार्ता सफल पार्न सकेनन् । जसका कारण नाकाबन्दी खुकुलो भएपनि पुरा खुल्न सकेको छैन । उनको कुटनितीक हैसियतमा प्रश्न चिन्ह लागेको छ । २५ जेठमा गरिएको १६ वुँदे सहमति अघिसम्म यिनलाई भारतीय पक्षधरका नेता पनि मानिन्थ्यो । तर के कुराको ताल–वितालले हो, मधेशी दलहरुले भारतको पेटवोलीमा यिनको राजीनामालाई वार्ताको पहिलो शर्तनै बनाए । तर यिनी त्यति कमजोर छैनन् । संसदमा बहुमतमा छन् भने नेपाली जनताको समर्थन यथावत नै कायम छ । त्यसैले भारतको नाकावन्दी नै हो मौजुदा कालो बजारी, महङ्गी र अभावको मूख्य कारण, ओलीको कारण होइन भनेर जनता चुप लागेका हुन् । तर धैर्यताको बाँध टुट्न लागिसकेको छ । वार्ता परिणाममुखी नभएकोमा जनता क्षुब्ध भएकाछन् । हावादारी गफकै भरमा सरकार चलाउँछु भन्नु महाधृष्टता हुन जान्छ । मधेशको बालहठ त छँदैछ ।
ओलीको अनियन्त्रित बोली पनि बार्ता बिच्क्याउने एउटा तत्व हो । उदाहरणको लागि पुस ४ गते इटहरीमा ओलीले भने ‘जो जति कराउँदै गरुन्, प्रदेश नं. १ बाट एउटा वडा पनि तलमाथि हुँदैन ।’ जवाफ हाजिर थियो उपेन्द्र यादवको ‘जव स्थिति समस्या समाधानतिर जान्छ, तब प्रधानमन्त्री गल्लीको डन र माफियाले बोलेजस्तै भाषा बोल्न थाल्छन् ।
सत्ता सम्हालेको एक महिनापछि अर्थात् कार्तिक २९ गते राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै भूकम्प पिडीत जनताको नाममा मनग्गे समवेदना व्यक्त गरेका थिए । नाकावन्दीले सिर्जेको दुःख कष्टलाई पनि निकै आत्मसात गरेका थिए । सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा सामाजिक सदभाव र आर्थिक मितव्ययिताप्रति प्रतिवध्दता देखाएका थिए । तर व्यवहारमा विल्कुल त्यस्तो देखिएन । २६ मा सीमित मन्त्रालयहरु ३० को संख्यामा पुगेकोछ । जसका कारण तीन अरव भन्दा बढी भार राज्यले भोग्नु परेको छ । मन्त्रीको संख्या त्यसै पनि बढी छ, थप्ने क्रम जारी छ । ओलीले थपेका मन्त्रीहरूले उनको सत्तालाई टेको लगाए पनि आर्थिक हिसावले मनपरी गरेर ठुलो हानि नोक्सानी पुर्‍याएका छन् । मुखबोली हिसावले तलव दिएर सल्लाहकारहरु पनि थुपारेका छन् । थुप्रै शाक्यहरूलाई सरकारी सुविधा दिलाएर ससुराली मोहमा पनि विगतका प्रधानमन्त्रीहरुलाई छेउ लगाई दिएका छन् ।
अडिग र वाकसिध्दी मानिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिंहासन सय दिन नपुग्दै डगमगाएको छ । प्रधानमन्त्रीको नाकावन्दीविरुध्दको अडान पनि तुहिएको छ । कहिले भारतको निम्तो मानौँला भनेर मुख मिठ्याएको बुझिन्छ । यही दुविधाको कारण चीनले पनि सोचे जस्तोगरी काँध नथापेको अवस्था छ । आकस्मिक बेलामा सघाएको चीनले तेलको सम्झौतामा थाङ्नामा सुताउन के बेर ? उता आफ्नै दलका नेताहरु पनि नाडी छाम्ने हेतुले मुख खोल्न थालेका छन् । सरकारका सहयात्री नेता प्रचण्डले त आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरुलाई सचेत गराईसकेका छन् । उनले जुनसुकै बेला सरकार छोडन तयार हुन फर्मान् जारी गरिसकेका छन् । संयुक्तका गणेश शाहले समर्थन फिर्ता लिईसकेका छन् । नाकाबन्दीको राप र तापमा जन्मेको सरकारको प्राण भनेको नेपाली जनताले असह्य दुःख, कष्ट सहेर देखाएको स्वाभिमान नै हो । त्यसको मूल्य चुकाउन नसके पनि तत्कालै यो सरकारलाई विस्थापित गर्नुभन्दा पनि ठोसेरै सकृय पार्नु बाध्यतापूर्ण परिपक्वता ठहर्छ ।
भूकम्पपीडितका नाममा करोडौं संकलन,पीडितका हात रित्तै(भिडियो)…
साताको राशिफल माघ १०–१६, २०७२
प्रयत्न गर्दा विगतका कमजोरीलाई सच्याउन सकिनेछ। टाढिएका आफन्तहरू नजिकिन सक्छन्। शिक्षा र बौद्धिक क्षेत्रमा उन्नति हुनेछ। कामको राम्रै मूल्यांकन हुनाले तपाईंको प्रतिभाको धेरैले तारिफ गर्नेछन्। प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर ठान्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने सम्भावना छ। रमाइला ठाउँको भ्रमण गर्ने मौका छ। कृषि तथा व्यापारमा राम्रो फाइदा होला। सप्ताहान्तमा मनग्य धनलाभ हुनेछ।
सुरुमा केही चुनौती देखिए पनि मेहनतले विभिन्न अवसर जुटाउन सकिनेछ। प्रतिपक्षीहरूले पनि काममा सहयोग जुटाउन सक्छन्। तर, अरूको मात्र भर पर्नाले तपाईंको महत्वाकांक्षा पूरा नहुन सक्छ। घर–परिवारमा असमझदारी बढ्नाले विशेष अवसर गुम्न सक्छ। विहीबारदेखि स्थितिमा सुधार आउनुका साथै रोकिएका काम बन्न सक्छन्। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन्। आर्थिक पक्ष पनि सबल बन्नेछ। रमाइला क्षणको सहयात्री बन्न सकिनेछ।
पहिलेको सम्झौताले विवाद निम्त्याउन सक्छ। ईर्ष्या गर्नेहरूले काम बिगार्न सक्छन्। तापनि बोलीको माध्यमले लाभ उठाउन सकिनेछ। बिस्तारै प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। प्रतिस्पर्धीहरूलाई वशमा ल्याउन सकिनेछ। सहयोगीहरू जुट्नाले व्यवसायमा राम्रै फाइदा हुनेछ। सप्ताहान्तमा परिवारिक असमझदारीले काम रोकिन सक्छ। घरायसी अलमलले पठनपाठनमा समय दिन नसकिएला। व्यापार-व्यवसायमा सामान्य लाभ हुनेछ।
सुरुमा लगनशीलताले प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका दिलाउनेछ। काममा अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट खानपानको आनन्द पाइएला। तर, स्वास्थ्य एवं बोलीको कारणले विवादमा परिने योग छ। हितैसी जनले तपाईंको कमजोरीप्रति टिप्पणी वा गुनासो गर्न सक्छन्, सचेत रहनुहोला। विहीबारदेखि सहयोगीहरूले फाइदा दिलाउनेछन्। टाढिएका आफन्त नजिकिन सक्छन्। चिताएका काममा राम्रै फाइदा हुनेछ।
सुरुमा केही खर्च लागे पनि सोचेको काम बन्नेछ। व्यवसायमा लगानी बढाउने मौका जुर्न सक्छ। तर, असन्तुलित खानपानले पेटको समस्या आउने समय छ। केही समयलाई वादविवादबाट टाढै रहनु बेस हुनेछ। अधैर्यपना बढ्नुका साथै काम नबन्ने डरले सताउन सक्छ। उपहारका नाउँमा काम नलाग्ने वस्तुमात्र हातलागी हुन सक्छ। मानसम्मानमा पनि आघात पुग्न सक्छ। सप्ताहान्तमा परिस्थिति अनुकूल बन्नुका साथै काम दोहोर्याउँदा लाभ हुनेछ।
आम्दानी सामान्य भए पनि ठूलो खाँचो टर्नेछ। खर्च भए पनि विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् । मंगलबार र बुधबार भने आर्थिक अभावले सताउन सक्छ। सोचेको काम समयमा नबन्नाले दुःख पाइनेछ। भोजभतेरको निम्तो आए पनि नियमित कामकै चिन्ताले सताउन सक्छ। मेहनत गर्दा अवसर भने पाइनेछ। आतिथ्यपूर्ण सम्मानका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिल्ने समय छ। सत्कार्यका माध्यमबाट औंलो ठड्याउनेहरूलाई जवाफ दिन सकिनेछ।
सुरुमा अरुको दबाबमा परी पनि कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग निकटता बढ्नेछ। आफ्नो क्षेत्रमा विश्वास जित्न सकिनेछ। भूमि वा पैत्रिक सम्पत्तिको उपयोगबाट थप फाइदा उठाउन सकिनेछ। प्रतिष्ठित कामको जिम्मेवारी पाइनेछ। नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने मौका छ। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। बिहीबारपछि भने खर्च बढ्ने र काम रोकिने सम्भावना छ। तापनि, सप्ताहान्तमा पारिवारिक भेटघाटले प्रसन्नता मिल्नेछ।
विगतका कमजोरी सच्याउने मौका मिल्नेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वको सहयोग जुट्नाले विशेष अवसर पाइने समय छ। दिगो फाइदा हुने काम शुभारम्भ गर्ने अवसर जुट्नेछ। आध्यात्मिक ज्ञानले दुर्भावनाका तरंगहरू समाप्त हुनेछन्। प्रयत्न गर्दा भाग्यले साथ दिनेछ। कीर्तिमानी काम गर्दै धेरैलाई प्रभावित बनाउन सकिनेछ। श्रमको उचित मूल्य पाइनुका साथै आम्दानी पनि बढ्नेछ। सप्ताहान्तमा खर्च बढ्ने र काम बिग्रने डरले सताउन सक्छ।
प्रयास गर्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट जोगिन सकिनेछ। कामको बोझ भने थपिने सम्भावना छ। तापनि सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्। स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउनुहोला। मंगलबारदेखि स्थिति अनुकूल बन्नुका साथै आस मारेको काम बन्नाले उत्साहित भइनेछ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। समुदायको हितमा गरिएका कामको तारिफ हुनेछ। योजनाहरू गोप्य राखी प्रतिष्ठा जोगाउने चेष्टा गर्नुहोला। सप्ताहान्तमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ।
सुरुमा रमाइलो यात्राको अवसर जुट्न सक्छ। मन मिल्ने साथी भेटिनुका साथै प्रेमको बन्धन समेत कसिन सक्छ। विवादले काम बिग्रन सक्छ। आर्थिक पक्ष पनि कमजोर बन्ने देखिन्छ । अप्ठ्यारा कामको बोझ थपिने सम्भावना छ । शुभचिन्तकहरूले साताभरि साथ दिनेछन्। साप्ताहान्तमा आस मारेको काम बन्न सक्छ। सामान्य कामबाट राम्रो लाभ उठाउन सकिनेछ। लगनशीलताले कीर्तिमान दिलाउन सक्छ। मानसम्मान समेत पाइने समय छ।
कामको सन्दर्भमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। अनावश्यक क्षेत्रमा ध्यान दिनाले झमेला आइपर्ला। मनको डरले पनि सताउन सक्छ। सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई भने फाइदै हुनेछ। मंगलबारदेखि प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि साथ दिनेहरू भेटिनेछन्। मेहनतले परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउन सकिनेछ। प्रेमको नाटक गर्नेहरूले धोका दिन सक्छन्। साताको अन्त्यमा स्वास्थ्य कमजोर रहनुका साथै काम बिग्रने डरले सताउन सक्छ
मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। बौद्धिक जमातलाई आकर्षित गर्ने काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। प्रतिष्ठा र अधिकारका लागि संघर्षमा उत्रनुपरे पनि प्रतिस्पर्धीहरूलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। व्यापार र उद्योगमा फाइदा हुनेछ। व्यवसायका लागि यात्रा गर्ने अवसर जुर्न सक्छ। मन मिल्ने साथी भेटिनुका साथै प्रेमको गाँठो समेत कसिने सम्भावना छ। भौतिक साधन जुट्नाले रोकिएको काम बन्नेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर मिल्नेछ।
उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल baralguru@gmail.com baralguru.com +977 9841352164
साताका पर्वहरु तथा वार्षिक राशिफल हेर्नुहोस्
खबरहरू तपाईंको ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्ः
नेपाली युनिकोडमा टाइप गर्नुहोस् राशिफल हेर्नुहोस्
तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख,
सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै
जानकारी आदि छ भने कृपया
connect@imagekhabar.com मा पठाउनुहोला ।
गृहपृष्ठ / कपीराईट २०१३ ईमेज समूह - सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ ।
वेबसाइट विकास तथा निर्माणः ईमेज च्यानल, सूचना प्रविधि शाखा ।